» Deg Deg+Sawiro: Ciidanka NISA oo fashiliyay Qarax Qorsheysan oo ka dhici rabay Muqdisho…Badweyntimes.com
Deg Deg+Sawiro: Ciidanka NISA oo fashiliyay Qarax Qorsheysan oo ka dhici rabay Muqdisho…
War hada nasoo gaaray ayaa sheegaya in ciidanka NISA ay ku guuleysteyn in ay fashiliyaan qarax Miino oo lagu diyaariyay mid ka mid ah Waddooyinka Muqdisho.
Qoraal ay NISA soo saartay ayaa lagu sheegay in qaraxu ahaa miino la dhigay wadadda mashquulka badan ee Taleex meel u dhow Isbitaalka DEVA, halkaasoo ay tageen ciidamada NISA ayna kala furfureen.
Akhriso Warsaxaafadeedka NISA:
Ciidamada Sirdoonka & Nabadsugidda Qaranka waxay aroornimadii saaki abaaro 6:25am ee 6/February/2017 ka hortageen qarax miino oo argagixisada soo dhigeen waddada Taleex, agagaarka Isbitaalka Deva ee Degmada Hodan, Gobolka Banaadir.
Miinadaas oo ay argagixisadu ugu tala galeen inay ku waxyeeleeyaan bulshada Soomaaliyeed, ayaa ciidamada Sirdoonka ka warheleen, waxaana goobtaas ka howlgalay ciidamada Ka hortagga Qaraxyada ee NISA kuwaasoo si xirfadaysan u furay miinadaas ayadoon wax khasaaro ah ka dhalanin.
Arrinkan waxay ka mid tahay howlaha ciidamada Sirdoonka ay ku badbaadinayaan bulshada Soomaaliyeed, laguna fashilinaayo damaca argagixisada ay ku doonayeen inay ku waxyeeleeyaan Bulshada.
« Warbixinta Ka HoreysayWAR CUSUB: Garoonka Aadan Cadde oo laga Mamnuucay in uu ka duulo Gudoomiye kuxigeenka Baarlamaanka…
Warbixinta Xigto »XOG: Musharaxiin Caan ah oo ka Haraya Tartanka Doorashada & Gor-gortan Socda…